सौराहाका माउते भन्छन् – 'पहिले हामीलाई बचाउनुस, हात्ती बचाउने जिम्मा हाम्रो भो !’
सौराहाका माउते भन्छन् – ‘पहिले हामीलाई बचाउनुस, हात्ती बचाउने जिम्मा हाम्रो भो !’
१९ असार २०७७, शुक्रबार १६:२२
सूर्यप्रसाद अधिकारी, असार १९, चितवन । कोभिड १९ को महामारीको असर सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिरहेको बेला यसको गम्भिर असर सौराहाका माउते पनि परेको छ । सौराहाको पर्यटनमा परेको गहिरो असरका कारण माउतेहरुलाई अहिले दैनिक हात मुख जोर्न समेत धौ धौ परेको छ । अन्य सामान्य परिस्थितिमा नियमित तलब र पर्यटकले दिएको टिप्सको भरमा सन्तोषजनक जीवन यापन गर्दै आएपनि पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भएपछि उनीहरुपनि आर्थिक संकटमा परेका हुन । पर्यटक नभएपछि र निकुञ्जले लकडाउनपछि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा हात्ती चराउन निषेध गरेपछि हात्ती पनि संकटमा परेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन ।
यसभन्दा अघि बिहान ४ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म उनीहरुको दिनचर्या पर्यटक घुमाउने,पर्यटकसंँग रमाउने र हात्तीको स्याहार सुसारमा बितेपनि लकडाउनपछि भने उनीहरु फूर्सदिला जस्तै बनेका हुन । सौराहामा माउते, पछुवा , फनेत गरी डेढसय जनाको हाराहारीमा छन । अहिले उनीहरुले नत नियमित तलब पाउन सकेका छन नत पेशा छाड्ननै सकेका छन । ‘४ महिना हुन लाग्यो नत तलब महिना मरेपछि आउंँछ, नत पर्यटकनै घुमाउन पाएका छौं ।’ ३५ बर्षदेखि माउते पेशा अंगालेका ४८ बर्षीय दशैं चौधरी दुखेसो गर्छन । अहिले उनको दिनचर्या हात्तीको आहारा खुवाउने र स्याहार सुसार र हात्तीसार रुघ्ने भन्दा फरक छैन ।
उनले हात्तीमाथि चढाएर पर्यटक घुमाएको पनि ३५ बर्ष भईसक्यो तर यस्तो अवस्था कहिल्यै आएको थिएन । ‘मेरो बुबा पहिलेनै साहुमहाजनको हात्ती चलाउनुहुन्थ्यो । मैलेपनि १२ बर्षमै हात्ती चलाउन सकें ।’ उनी विगत सम्झन्छन । विरगंज स्थायी घर भएका चौधरी कोरोना कहरका कारण उनको परिवारमा चुलो बाल्न धौधौ परेको बताउंँछन । घरका अन्य सदस्यले ज्याला मजदुरी गरेपनि आफूले यस पेशाबाट अलग्गिन नसकेको उनले बताए । ‘परिवारसंँग भन्दा हात्तीसंँग बढी समय बित्यो उनी भन्छन , परिवारको भन्दा मलाई हात्तीको माया लाग्छ ।’ उनी भावुक बन्छन । तर तीनै हात्ती लकडाउनपछि आहाराको संकटमा पर्दा उनको मन कुंँडिनेनै भयो ।
विगतका बर्षमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा हात्ती चराउने दिएपनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले अहिले निकुञ्जले निषेध गरेको हो । त्यसैले अहिले माउतेहरु आफ्नो भोक टार्न भन्दा पनि हात्तीको आहारा जुटाउन सामुदायिक वनमा घांँस काट्न जाने गर्छन । ‘हात्ती चराउन त दिदैन, घांँस काट्न चांँही दिन्छ ।’ माउते चौधरी सन्तोष गर्छन । सहज परिस्थितिमा हात्तीहरु जंगल सफारी गर्दा उतै चर्ने हुंँदा त्यति आहारा जुटाउनु पर्थेन । दैनिक हात्तीको आहारा जुटाउंँदै आएका माउते हात्ती चराउन निकुञ्जले नदिएपनि हात्तीको लागि आहाराको समस्या नपर्ने दाबी गर्छन , फनेत माउते संघ, सौराहाका अध्यक्ष सुक बहादुर कुमाल ।
‘हात्तीलाई बरु भोको बस्न दिएका छैनौं , उनले भने, हाम्रो बरु हातमुख जोर्न मुश्किल भयो ।’लकडाउनले बनाएको विवशता कुमालले कहे । उनका अनुसार झण्डै ४७ बर्षदेखि माउत पेशा र हात्तीको स्याहार सुसार गर्दै आएकाले हात्तीको आनीबानी उनलाई राम्ररी थाहा छ । ‘हात्तीलाईत हामी जसरी पनि बचाउंँछौ त्यो हाम्रो जिम्मा भो, हामीलाई पहिला बचाउनु पर्यो नि ।’ उनले हात्तीधनी प्रति असन्तुष्टी पोख्छन । सरकारी हात्तीका माउतेले नियमित तलब पाएको तर आफूहरु निरीश भएकोले सरकारले पनि यसतर्फ चासो राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । हात्तीधनीले स्वयं हात्तीलाई आफैं स्याहार्न सक्दैनन न त अन्य सामान्य मानिसले नै सक्छन । माउते बन्न पनि विभिन्न तालिम लिनुपर्छ , चरण पार गर्नुपर्छ ।
हात्ती मेरो साथी भनेझै माउतेहरुको हात्तीसंँगको लगाव उत्तिकै हुन्छ । तर बार्षिक हजारौं पर्यटक घुमाउने माउतेहरु भने संकटमा परेका छन । ‘हामीले जानेको कामनै यही हो । हामीलाई अरु काम गर्नपनि आउंँदैन , म झण्डै ७० पुग्न लागिसक्यो । बुढो भयो, कता जाने के गर्ने ? बेरोजगारी जस्तै बनेका माउते कुमालले बेथा बिसाए ।
तात्कालिन समयमा पूर्वराजा विरेन्द्र शाह निकुञ्जमा शिकार खेल्न आएका बेला तीन तीन पटक जंगल सफारी गराएका कुमाल यस्तो संकटको सामाना कहिल्यै गर्नुनपरेको अनुभव सुनाउंँछन ।
उनीजस्तै अन्य माउतेको व्यथा पनि उनको भन्दा कम छैन । उनीहरुपनि लकडाउन खुल्ला र अवस्था सहज बन्ला भनेर पर्खाइमा छन । तर उनीहरुको पर्खाइको पीडा सही नसक्नु छ । अधिकांश चितवनका पिछडिएका समुदाय माउत , माझी, र डुंगा चलाउने पेशाकर्म गर्दै आएका छन । पुस्तौंदेखि उनीहरुले यही पेशालाई निरन्तरता दिने बाध्यता छ । हाल उनीहरुले यो पेशा छाड्न सम्भव पनि छैन ।
विगत ७ बर्षदेखि माउत पेशा गर्दै आएका भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २८ का राम कुमाल भन्छन ‘४ महिना हुन लागिसक्यो टुरिष्टको नाकमुखनै देख्या छैन, एकसुको पैसा हात पनि पर्या छैन ।’ उनले आफ्नो पीडा सुनाए । उनलाई आफ्नो पेशाको चिन्ता त छदैछ , स्कुल जान थालेका बच्चाबच्चीको चिन्ताले झनै गांँजेको छ । ‘अब बच्चाहरुलाई स्कुल भर्ना गर्नुपर्ने बेला भयो, साहुले पैसा दिनै ढिला गर्छ ।’उनले भने ।
पर्यटक व्यवसाय अस्तव्यस्त भएकोबेला पर्यटन व्यवसायीले नत बैंकको ऋण नियमित तिर्न सकेका छन नत कर्मचारीलाई तलब दिननै सकेका छन । पर्यटन व्यवसायीले सबै कर्मचारीलाई लकडाउन शुरुभएपछि बेतलबी दिएर बिदाई दिइसकेका छन । तर त्यही पर्यटन व्यवसायीका लाखौं रुपैयांँ पर्ने हात्तीहरु भने पाल्नुपर्ने बाध्यता छंँदैछ । युनाईटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था , सौराहाका अध्यक्ष ऋषिराम तिवारी भने हात्तीहरुलाई आहारा खुवाउन नसकेको बेला हात्ती धनीले नदिएपनि सहकारीको कोषबाट दिएको बताउंँछन । माउते बाहेक अन्य कसैले हात्तीको हेरचाह गर्न नसक्ने हुनाले पनि तलब नियमित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
व्यवसायी, हात्ती, माउते सबैको अवस्था उस्तै छ । गर्ने के ? उनी अनुत्तरित हुन्छन ।
जंगलसफारीनै पर्यटनको प्रमुख आधार रहेको देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहाका हात्ती र माउतेनै संकटमा पर्ने हो भने यहाँको पर्यटन कसरी उंँभो लाग्न सक्ला ? सबैको चिन्ताको बिषय यहीनै छ ।